Gịnị bụ ike ndọda: àgwà, nnyocha na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 18/11/2021 10:00 | Ciencia
La ndọda ọ bụ ike na-adọta ihe na oke na ibe ya. Ike ya dabere na oke ihe. Ọ bụ otu n'ime ihe anọ a ma ama bụ isi mmekọrịta nke ihe, a pụkwara ịkpọ ya "gravitation" ma ọ bụ "mmekọrịta ndọda." Ike ndọda bụ ike anyị na-enwe mgbe ụwa dọpụrụ ihe ndị gbara ya gburugburu ruo etiti ya, dịka ike na-eme ka ihe daa. Ọ bụkwa ya na-ahụ maka mbara ala ndị na-agba anyanwụ gburugburu, n’agbanyeghị na ha nọ n’ebe dị anya site n’anyanwụ, ọ ka na-adọrọ mmasị ha n’ebe ọ nọ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe ike ndọda, kedu ihe njirimara ya na mkpa ya.
1 Gịnị bụ ike ndọda na otú e si chọpụta ya
2 Nkeji nha
3 Gịnị bụ ike ndọda na oge gboo mekaniki
4 Dị ka usoro relativistic na arụ ọrụ quantum siri dị
Gịnị bụ ike ndọda na otú e si chọpụta ya
Ike nke ike a metụtara ọsọ nke mbara ala: mbara ala dị nso na anyanwụ na-agba ọsọ ọsọ na mbara ala ndị dị anya site na anyanwụ na-eji nwayọọ nwayọọ. Nke a na-egosi na ike ndọda bụ ike na, n'agbanyeghị na ọ na-emetụta nnukwu ihe ọbụna n'ebe dị anya, ike ya na-ebelata ka ihe ndị ahụ na-apụ na ibe ha.
Ozizi mbụ nke ike ndọda sitere n’aka onye ọkà ihe ọmụma Gris Aristotle. Site na oge mbụ, ụmụ mmadụ aghọtala na mgbe enweghị ike ịkwado ha, ihe na-ada. Otú ọ dị, ọ bụghị ruo na narị afọ nke anọ BC. C. na ọmụmụ ihe gbasara ndị agha ga-eme ka ha "wedata" malitere. C, mgbe onye ọkà ihe ọmụma Gris Aristotle depụtara echiche mbụ.
N'echiche ya n'ozuzu ya, ụwa bụ etiti nke eluigwe na ala na, ya mere, onye na-akwado ihe ike na-adịghị ahụ anya, nke na-adọta ihe niile. A na-akpọ ike a "gravitas" n'oge ndị Rom ma jikọta ya na echiche nke ịdị arọ, n'ihi na ọ naghị ama ọdịiche dị n'etiti ịdị arọ na oke ihe n'oge ahụ.
Copernicus na Galileo Galilei mechara gbanwee echiche ndị a kpamkpam. Otú ọ dị, ọ bụ Isaac Newton bụ onye ji okwu ahụ bụ "gravitation" pụta. N'oge ahụ, e mere mgbalị mbụ iji tụọ ike ndọda wee mepụta echiche a na-akpọ iwu nke ike ndọda ụwa.
A na-atụle ike ndọda dabere na mmetụta ya, nke bụ osooso nke ị na-ebipụta na ihe na-akpụ akpụ, dịka ọmụmaatụ, ihe na ọdịda efu. N'elu ụwa, a na-agbakọ osooso a ka ọ bụrụ ihe dịka 9.80665 m / s2, ọnụ ọgụgụ a nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnọdụ ala na elu anyị.
Ọ na-atụ osooso nke ihe dọtara n'ihe ọzọ nke ka ukwuu.
Dabere n'ihe ịchọrọ ịmụ, a na-atụ ike ndọda n'oke abụọ dị iche iche:
Ike: Mgbe a tụrụ ya dị ka ike, a na-eji Newton (N), nke bụ otu nke International System (SI) na-asọpụrụ Isaac Newton. Ike ndọda bụ ike a na-enwe mgbe otu ihe na-adọrọ mmasị na nke ọzọ.
Osooso. N'okwu ndị a, tụọ osooso enwetara mgbe otu ihe na-adọrọ mmasị na ihe ọzọ. N'ihi na ọ bụ osooso, a na-eji unit m / s2.
Ekwesiri ighota na enyere ihe abuo abuo, ike ndọda nke ihe ọ bụla nwere bụ otu n'ihi ụkpụrụ omume na mmeghachi omume. Ihe dị iche bụ osooso, n'ihi na uka dị iche iche. Dị ka ihe atụ, ike ụwa na-akpa n’ahụ́ anyị hà ka ike ahụ́ anyị na-akpa n’ụwa. Ma n'ihi na oke ala dị ukwuu karịa oke ahụ anyị, ụwa agaghị eme ngwa ngwa ma ọ bụ na-agagharị ma ọlị.
Gịnị bụ ike ndọda na oge gboo mekaniki
A na-agbakọ ike ndọda site n'iji iwu Newton nke ike ndọda ụwa. Ike ndọda n'ọrụ oge gboo ma ọ bụ Newtonian na-esote usoro ihe omimi nke Newton, nke na-ekwu maka ike na ihe anụ ahụ dị n'ụdị ntụaka edobere dị mkpa. Nke a ike ndọda dị irè na sistemụ nlele inertial, nke a na-ewere dị ka ihe na-emekarị maka nyocha.
Dị ka ọrụ oge gboo si kwuo, a na-ekpebi ike ndọda dị ka:
Ike na-adọrọ adọrọ mgbe niile.
Ọ na-anọchi anya oke enweghị ngwụcha.
Na-egosi ike ikwu nke ụdị etiti ahụ.
Ka ọ na-eru nso n'ahụ ahụ, otú ahụ ka ọ na-esiwanye ike, na otú ọ na-adịru nso, otú ahụ ka ike na-esiwanye ike.
A na-agbakọ ya site n'iji iwu Newton nke ike ndọda ụwa.
Iwu nke okike a dị oke mkpa maka ọmụmụ ihe ọtụtụ ihe okike dị n'ụwa na eluigwe na ala. Newton's theory of universal gravitation bụ nke ndị ọkà mmụta sayensị Britain tụlere ya. Otú ọ dị, kasị zuru ezu tiori nke ike ndọda Einstein tụpụtara ya n'ozizi izugbe ya ama ama nke relativity.
Newton's theory bụ ihe gbasara echiche Einstein, nke dị oke mkpa mgbe anyị na-amụ mpaghara mbara igwe ebe ike ndọda dị ukwuu karịa ihe anyị na-ahụ n'ụwa.
Dị ka usoro relativistic na arụ ọrụ quantum siri dị
Dị ka usoro relativistic si kwuo, ike ndọda bụ nrụrụ nke oge oghere. The relativistic mekaniki nke Einstein mebiri echiche Newton n'akụkụ ụfọdụ, karịsịa ndị ọdabara na nleba anya gbasara oghere. Ebe ọ bụ na eluigwe na ụwa niile na-agagharị, iwu oge gboo na-efunahụ ikike ha n'ebe dị anya n'etiti kpakpando na enweghị ebe nrụtụ aka zuru ụwa ọnụ ma kwụsie ike.
Dị ka usoro relativistic si kwuo, ike ndọda adịghị adị naanị site na mmekọrịta dị n'etiti nnukwu ihe abụọ mgbe ha na-adịru ibe ha nso, kama n'ihi nrụrụ geometric nke oge oghere nke nnukwu stellar mass kpatara. Nke a pụtara na ike ndọda pụrụ ọbụna imetụta ihu igwe.
Ugbu a, enweghi tiori nke ike ndọda. Nke a bụ n'ihi na physics subatomic particle physics nke quantum physics na-akpakọrịta dị nnọọ iche na nnukwu kpakpando na tiori nke ike ndọda na-ejikọta ụwa abụọ (quantum na relativistic).
Atụpụtala echiche na-anwa ime nke a, dịka loop quantum gravity, superstring theory or torsion quantity theory. Otú ọ dị, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịnwapụta.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ihe ike ndọda bụ na mkpa ọ dị na sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gịnị bụ ike ndọda